Accueil > Gazetin'ny nosy > Amoron’i Mania : Tsy mbola nandray karama ireo mpiasan’ny lycée technique
Amoron’i Mania : Tsy mbola nandray karama ireo mpiasan’ny lycée technique
Velon-taraina ankehitriny ny havan’ireo mpiasa madinika (ECD) ao amin’ny Lycée technique professionnelle ao Amoron’i Mania satria hatramin’izao dia tsy Mbola nanadray ny anjara-valin-kasasarany ireo mpiasa ireo. Hany ka any amin’ireto havany no mangataka fanampiana sy misambo-bola hiatrehana ny fiainana ireo mpiasa ireo.
Iaraha-mahalala ny fahasahitranana mianjady amin’ny isan’ankohonana amin’izao fotoana, hoy ireto havan’ny mpiasan’ny lycée technique nefa dia mbola manampy trotraka ihany koa ny tsy maintsy anampiana an’ireo havana tra-pahasahiranaa, ka mba rariny sy hitsiny raha mitaraina ka mba ikatsahan’ny tompon’andraikitra vahaolana haiangana izao tranga izao.
Raha ny fanamarihan’ireto fianakavian’ny mpiasa tra-pahasahiranana ireto mantsy dia na ireo mpivarotra sy ny mpiara-monina aza tsy afaka manome azy ireo trosa intsony satria efa betsaka ny tsy voaloan’ izy ireo.
Natao ihany ny tsy hitaraina, hoy ny havan’ireo mpiasa “Ecd” fa niandry foana hatramin’izay kanefa dia tsy hay na tany lavitra Andriana na fanadinoana na inona fa dia mijaly izy ireo.
Manaitra ny ministeran’ny Fanabeazam-pirenena sy ny ministeran’ny Vola ny any Amoron’i Mania mba hitady ny vahaolana haingana amin’izao tranga izao fa mijaly ny mpiasa any.